I-Tanzania inomdla wokubona ukuqala komboniso wokuqala wezokhenketho wengingqi
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeShishini lokuhlangana » I-Tanzania inomdla wokubona ukuqala komboniso wokuqala wezokhenketho wengingqi
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukwaphula Iindaba zeTanzania • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
I-Tanzania ilungele umboniso wezokhenketho wengingqi ye-EAC
Umboniso wokuqala kunye nowokuqala wobukhenketho wengingqi yamazwe angama-6 angamalungu oLuntu lwaseMpuma Afrika (i-EAC) kulindeleke ukuba uqhubeke kwasekuqaleni kweyeDwarha. Kuye kwaphuhliswa ukutsala iinkampani zabakhenkethi kunye nabenzi bomgaqo-nkqubo kuyo yonke indawo yommandla.
Uphawulwe njenge-East African Regional Tourism Expo (EARTE) 2021, umboniso ucwangciselwe ukuvulwa ukusuka nge-9 ukuya kwi-16 ka-Okthobha.
Lo msitho utsale umdla wabadlali bezokhenketho abavela kumazwe angamalungu e-EAC.
I-EARTE 2021 ngumboniso wokuqala wokhenketho wengingqi oza kwenzeka eMpuma Afrika, ujolise ekwakheni inkqubo edibeneyo eya kuthi idibanise amazwe angama-6 ukuba enze inyathelo lokhenketho lommandla.
Abathathi-nxaxheba kwi-EARTE baquka abathengi bamanye amazwe kunye namajelo eendaba azakuthatha inxaxheba ekubhenceni iindawo ezinomtsalane zabakhenkethi ezikhoyo eMpuma Afrika kwilizwe ngalinye.
Lo mboniso uza kulandelwa luhambo lokuqhelanisa abathengi nabapapashi bamanye amazwe kwiindawo ezithile zabakhenkethi eTanzania nase-EAC ezibandakanya uLwandlekazi lwaseIndiya namanxweme echibi, izilwanyana zasendle, ubuhle bendalo, iindawo zembali kunye nelifa lemveli elityebileyo.
Umxholo walo mboniso uzayo uthi “Ukukhuthaza uKhenketho oluQinisekayo kuPhuhliso loQoqosho oluBandakanyayo.” Umxholo uyilelwe ukwazisa isidingo sokuphuhlisa nokuhlaziya icandelo lezokhenketho ngendlela ezinzileyo ukunciphisa ifuthe kwicandelo ngubhubhani we-COVID-19.
Ummandla we-EAC ulahlekelwe phantse ngama-70 eepesenti abakhenkethi bamazwe aphesheya abafikayo ngo-2020, kunye neelahleko ezinkulu kwimivuzo yezokhenketho nakwimisebenzi enxulumene nokhenketho, utshilo. i-EAC UNobhala Jikelele, uPeter Mathuki. Ulondolozo lwezilwanyana zasendle kwingingqi lwasokola kakhulu kulo bhubhane ngokuphulukana nengeniso yolondolozo, uninzi lwayo lwenziwa ngabakhenkethi abatyelela iindawo ezikhuselweyo kunye nolondolozo lwezilwanyana zasendle kuwo wonke loo mmandla.
Icandelo lezokhenketho yenye yezona ndawo zibaluleke kakhulu zentsebenziswano kwi-EAC, ngenxa yegalelo layo kuqoqosho lwaMazwe angamaQabane ngokwe-GDP (malunga ne-10%), ingeniso yokuthumela kwelinye ilizwe (17%), kunye nemisebenzi (malunga ne-7% ). Iziphumo zayo eziphindaphindayo kunye nokunxibelelana namanye amacandelo anezixhobo kumdibaniso onje ngezolimo, ezothutho, kunye nemveliso zikhulu kakhulu.
Inqaku le-115 lesiVumelwano se-EAC libonelela ngentsebenziswano kwicandelo lezokhenketho, apho aMazwe angamaQabane azibophelela ekuphuhliseni indlela ehlangeneyo nelungelelanisiweyo yokwazisa kunye nentengiso yokhenketho olusemgangathweni ngaphakathi noluntu.
Ngokukodwa, bathembisa ukulungelelanisa imigaqo-nkqubo kwishishini lezokhenketho, ukubeka emgangathweni ukuhlelwa kwehotele, kunye nokuphuhlisa iqhinga lommandla lokukhuthaza ukhenketho, apho iinzame zomntu ngamnye ziqiniswa zizenzo zommandla.
Amazwe angamalungu e-EAC ebekhuthaza ukhenketho lwengingqi kwimiboniso yezokhenketho yamazwe aphesheya, kubandakanya iMarike yoKhenketho yeHlabathi (eLondon) kunye neBourse yoKhenketho yeHlabathi (i-ITB) eBerlin.
Umboniso wezoKhenketho weNgingqi emva koko uya kusingathwa ngaMazwe angamaQabane ngokujikeleza.
Ngexesha leNtlanganiso yesiqhelo engaqhelekanga ebibanjwe nge-15 kaJulayi ka-2021, iBhunga leCandelo lezoKhenketho noLawulo lweZilwanyana zasendle lagqiba kwelokuba I-Tanzania kufuneka ibambe i-1st EAC yeNgingqi yezoKhenketho e-Arusha Ngo-Okthobha u-2021. Ukhetho lwe-Arusha-indawo yabakhenkethi eTanzania kunye nesixeko sase-safari-lwenziwe lwanciphisa ukufikelela kwabo bathatha inxaxheba kuwo onke amaZwe amaQabane.
Injongo yalo mboniso kukwazisa i-EAC njengendawo eyodwa kwezokhenketho, ukubonelela ngeqonga labanikezeli beenkonzo zokhenketho kushishino (B2B), kunye nokwenza ulwazi ngezokhenketho.
Lo msitho uza kubandakanya imiboniso yababoneleli beenkonzo zokhenketho, iintlanganiso zokunxibelelana ngesantya kunye neentlanganiso ze-B2B, kunye neesemina zokhenketho kunye nemixholo engezilwanyana zasendle. Ngokubhekisele kwicandelo lezokhenketho, le mixholwana iza kujikeleza kwimiba efana nokomelela kwezokhenketho kunye nolawulo lweengxaki, ukuthengisa ukhenketho lwedijithali, ukuphuhliswa kweendawo zokufikela kwiindawo ezininzi, kunye namathuba otyalo-mali kukhenketho.
Kwelinye icala, imixholwana enxulumene nezilwanyana zasendle iya kubandakanya Ukulwa nokuzingela ngokungekho mthethweni kunye noRhwebo lwezilwanyana zasendle ngokungekho mthethweni kunye nexabiso lezoqoqosho lwezilwanyana zasendle kwingingqi.
Okona kubalulekileyo ngokunjalo, lo mboniso uza kuqinisa ukhenketho lwangaphakathi kwengingqi ukongeza kukhenketho lwamazwe aphesheya ngokukhuthaza imveliso yezokhenketho kubemi be-EAC. Oku kuyakwakha kwiinzame zangaphambili ezinje ngesigqibo seBhunga laBaphathiswa lokuba amaZwe amaQabane anikezele ngeerhafu zokukhetha kubemi abatyelele abakhenkethi kulo mmandla ngeerhafu ezisebenza kubemi.